5 Volavola Ball Valve Seal Surface Design-Teknika Teknika-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika anay)
Famolavolana Ball Valve Seal Surface 5 samihafa
Fotoana: 2020-09-30 Hits: 53
Ao amin'ny indostrian'ny valizy, ny singa manan-danja indrindra amin'ny valin'ny baolina mba hamehezana ny tsindry ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso ny tsiranoka dia ny seza valizy na ny tarehy famehezana valva. Ny baolina dia hiara-hiasa amin'ny seza baolina hanamafisana ny tsindry. Amin'ny rafitra fanaraha-maso samy hafa dia hanana fitaovana samihafa izy io, noho izany ny injenieran'ny famolavolana valizy dia mila mampifanaraka seza valizy samy hafa na valin'ny valizy valizy samy hafa mba hamehezana ny tsindry amin'ny fampiasana fitaovana injeniera samihafa. Ity lahatsoratra ity dia hampiseho famolavolana seza valizy 5 samihafa.
Karazan-seza valizy baolina voalohany dia karazana seza valizy malemilemy seza iray. Matetika ny lokon'ity seza ity dia fotsy ary be mpampiasa amin'ny indostrialy valizy malemy seza. Ity seza fotsy vita amin'ny PTFE ity. Ny tombony an'ity seza ity dia ataon'ny injeniera Teflon ary rehefa hanangona ity karazana seza valizy ity sy ny baolina ao anatin'ny vatan'ny valizy isika. Rehefa hanery ny seza valizy amin'ny baolina isika, ity karazana fiaraha-miasa ity dia mora tokoa hanidy ny tsindry ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso mikoriana. Na izany aza ny fatiantoka dia satria tsy metaly sy malefaka ny seza valizy ka raha tsy madio ny tsiranoka ary misy sombiny kely ao anatiny dia mety hanimba ny seza valizy ny zana-kazo ary hahatonga ny fivoahan'ny valizy ka mitady injeniera hafa ny injeniera. dia mafy noho ity karazana seza malefaka ity ary koa ny fitaovana no elastika elastika.
Ka karazana fitaovana inona no manana an'io fananana io? Amin'ny indostrian'ny valizy bala, ny injeniera dia mamorona loko hafa. Ireo seza miloko isan-karazany ireo dia avy amin'ny fitaovana Rein-force PTFE. Ny tanjon'ny fampivelarana ireo fitaovana seza miloko ireo dia mila manatsara ny mari-pana fampiharana PTFE ho an'ny avo kokoa. Ka ny injeniera dia manafangaro karazana fitaovana hafa amin'ny PTFE mba hanao karazana fitaovana vaovao.
Ny PTFE fanatsarana voalohany dia amin'ny PTFE mifangaro karbonika Mba hanaovana karazana seza iray ity. Mainty ny loko.
Ny iray hafa dia mifangaro PTFE miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony. Ity seza fitaovana ity dia manana tombony roa raha ampitahaina amin'ny seza PTFE madio. Ny iray dia afaka miasa amin'ny hafanana ambony amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso noho ny teo aloha. Ny iray hafa dia ny hamafin'ny materialy no tsara lavitra noho ny teo aloha. Amin'ny ankapobeny ity fitaovana ity dia mafy kokoa noho ny PTFE madio. Ka ny sombin-javatra ao anaty haino aman-jery dia tsy mora kokoa ny manimba ny seza valizy raha ampitahaina amin'ny PTFE. Ka ireto karazany roa ireto dia karazana seza valizy hafa amin'ny indostrian'ny valizy malemy.
Valizy malemy fipetrahan'ny seza malefaka dia karazana valizy iray izay tena mora tokoa ny mahazo ny fivoahan'ny zero satria ny seza valizy dia karazana fitaovana elastika saingy io karazana endrika io dia nisy fatiantoka iray raha toa ka nitranga ny afo dia mety handrava tanteraka ny valizy ny afo. seza. Ka raha ny fanamboarana iray dia rafitra fanaraha-maso mikoriana na mampiasa valizy baolina seza malefaka, raha sendra misy ny afo dia hiparitaka daholo ny mpanelanelana ka hisy loza lehibe tokoa ka te hanana endrika seza misy valizy ny injeniera izay seza malefaka fa afaka tohero ny loza mety hitranga amin'ny afo ary antsoina hoe endrika azo antoka amin'ny afo araka ny API 607.
Amin'ny indostrian'ny valizy malemilemy, na inona na inona fitaovana ampiasainao hanamboarana ny seza valizy raha sendra misy ny afo, dia hanimba tanteraka ny seza valizy ny hafanana avo, ho tafaporitsaka ny valizy ka izany dia hitera-doza. koa eo amin'ny sehatry ny valizy malemy seza dia zava-dehibe tokoa ny famolavolana afo azo antoka. Ny seza voalohany izay miara-miasa amin'ny baolina hamehezana ny tsindry. Rehefa niseho ny afo dia nanimba tanteraka ny seza tany am-boalohany ny hafanana ambony satria ny rafitra fanaraha-maso dia manana ny tsindry ao anatiny, ny tsindry dia hanosika ny fikorianan'ny baolina mankany amin'ny farany ambany. Ka injenieran'ny famolavolana valizy no namorona ny tombo-kase faharoa. Ity seza faharoa ity dia ampahany amin'ny vatan'ny valizy. Fitaovana vy izy io ka tsy ho simban'ny hafanana ambony. Ary koa ny seza valizy faharoa, ny tampon'ny tombo-kase dia voafetra tokoa ka mora tokoa ny miara-miasa amin'ny baolina hamehezana ny tsindry ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso mikoriana. Na dia amin'ity toe-javatra ity aza, raha manery ny baolina hiara-miasa amin'ny seza valizy faharoa ny tsindry hamehezana ny tsindry ao anatin'ny rafitra mikoriana, dia tsy afaka miverina miasa intsony ny valizy fa farafaharatsiny mbola azo antoka ny fampitam-baovao ao anaty rafitra fanaraha-maso. Ka ity karazana endrika ataontsika hoe ny endrika fiarovana ny afo ity.
Ny famolavolana seza valizy manaraka dia vy amin'ny seza vy. Rehefa miresaka seza vy amin'ny indostrian'ny valizy isika, raha ny marina dia manana karazana seza roa isika. Ny iray dia seza vy misy fantsona fitaovana malefaka toy ny sary etsy ambany.
Ity karazana seza ity dia vita amin'ny alàlan'ny metaly, ny riaka dia hanosika ny seza hikasika ny baolina hanisy tombo-kase ny tsindry fa ny tena famehezana ny seza valizy izay ny faritra hikasika ny baolina dia tsy vy satria hiditra isika fitaovana seza malefaka ao anatin'ny seza vy. Ny faritra hikasika ny baolina hamehezana ny tsindry ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso. Ny seza vy dia zana-kazo hiarovana ny seza valizy tena hikasika ny baolina hamehezana ny tsindry. Ity famolavolana seza karazana ity dia miasa amin'ny valizy baolina lehibe ary manana fahombiazana avo lenta amin'ny fampiharana satria mora ampiasaina ho simba amin'ny habe be ny fitaovana seza malefaka. Ny seza vy hiarovana ny fitaovana malefaka ao ambanin'ity faritra ity.
Misy vy hafa amin'ny vy amin'ny valin'ny vy. Ny seza valizy baolina dia vita amin'ny vy avokoa ary ny seza vy dia hiara-hiasa amin'ny vy vy hamehezana ny tsindry ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso mikoriana. Ity seza karazana valizy ity dia afaka miasa amin'ny hafanana avo be sy tontolo iainana faneriterena avo lenta saingy ity karazana endrika sarotra hamokarana ity satria ny baolina sy ny seza dia mila milina tena marina ary miforitra. Satria metaly tanteraka ny seza valizy ka tsy maintsy mafy noho ny seza ny baolina. Raha malefaka kokoa noho ny seza baolina ny baolina, dia hikorisa ny baolina ny seza valizy ary hahatonga ny fivoahan'ny valizy. Na inona na inona seza valizy baolina kasainao hamboarina, ny tampon'ny famehezana ny sakany dia tsy maintsy mafy noho ny tarehy famehezana. Ity valizy baolina seza vy ity dia somary miavaka satria natao ho andalana roa ho an'ny sealing valin'ny valizy. Ity takelaka roa misy famehezana ity dia afaka manao an'io famehezana valizy io azo antoka kokoa. Ny fanaovana ny baolina dia mafy noho ny seza valizy. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia hampiasa fitsaboana maro samihafa isika mba hahatonga ny baolina ho mafy noho ny seza valizy.
Ny farany dia valizy milahatra baolina. Ity karazana valizy baolina ity dia tena miavaka ary karazana valizy baolina hafa. Amin'ny karazana rafitra fanaraha-maso manokana, ny media dia mikorontana tokoa, tsy afaka mampiasa metaly hikasika ny onjampeo aza izahay, noho izany dia hampiasa PFA na PTFE na karazana fitaovana hafa izahay handrakotra ny baolina ary koa handrakotra ny rehetra. ny faritra izay hikasika ny haino aman-jery.
Taloha: Valve Ball mitsingevana sy Trunnion mitaingina fanodinam-bola